Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Somaliland oo Sheegay in cadaaladda uu xooga saari doono – Radio Daljir
Juunyo 4, 2015 2:01 b 0
Khamiis, Juun 04, 2015 (Daljir) — Labadda Gole Baarlamaan ee Guurtida iyo Wakiillada maamulka Somaliland ayaa shalay fadhi ay yeesheen ku Ansixiyay Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Aadan Xaaji Cali oo dhawaan Madaxweynaha Somaliland uu xilkan u soo magacabay.
Kulanka oo uu Shir-gudoominayey Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa Xildhibaannada u soo jeediyey inay Ansixiyaan ama Diidaan Guddoomiyaha Cusub ee Maxkamadda Sare ee dhawaan lasoo Magacaabay.
Fadhigan waxa ka soo xaadiray 122 mudane, waxaana ogolaaday 110 xildhibaan, waxaana ka aamusay 11 mudane, halka ciid ciiday aanay jirin gudoomiyuhuna aanu codayn.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Somaliland, ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aaddan ansixinta Baarlamaanka iyo qorshihiisa wax qabad ee dhanka caddaaladda kadib markii maanta baarlamaanku cod aqlabiyad ah ku meel mariyay.
Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali ayaa markii la ansxiiyey la hadlay warbaahinta, waxaanu ballanqaaday inuu si cadaaladdda ah ugu shaqayn doonno shacabkiisa.
“Runtii dareenkaygu wuxuu isugu jiraa laba, mid waan ku faraxsanahay in labadii aqal ee baarlamaanku kalsooni I siiyeen. Midna runtii waa masuuliyad culus. markay bulshada dhex-deeda noqoto wax-qabadka yaala iyo Illaahay hortiisa waa masuuliyad culus”ayuu yidhi gudoomiyaha cusub Aadan Xaaji Cali.
Waxaanu intaas ku daray “Markaa Kalsoonidaa dadku igu qabaan ee codka la igu siiyay waxaan rabaa inaan dadka ugu shaqeeyo, ta dambena waxaan rajaynayaa Illaahayna inuu ii fududeeyo dadaal badana aan sameeyo, dadkana aan la tashado Insha Allah,”.
“Caddaaladda waynu ognahay oo dhawr iyo Labaatankaan Sano wuxuu ahaa laf dhabarta qaranka, waxay ku shaqeeyaan duruuf adag, wax badana way qabteen, waa meesha kaliya ee dadweynuhu u gar tagaan ee kala haysa ee kala hagta, markaa waxaan rajaynayaa inaan halkaas wax kaga sii daro oo aan wax ku kordhiyo oo aan wax tar ula tago,” ayuu raaciyay hadalkiisa.
Si kasta ha ahaatee, Shacabka ayaa si weyn uga cawdo waaxda cadaaladda, isla markaana ay ku eedeeyaan in si cadaalad ah dadka u kala saarin, isla markaana waaxda Garsoorku ku milantay xukuumadda ama waaxda Fulinta.